हाम्रो प्रतिस्पर्धा निजी विद्यालयहरुसँगै हो – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार डा. गीता खरेल, रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय
पहिले त विद्यालय राम्रो थिएन भन्ने पनि सुनिन्थ्यो नि ! कहिलेदेखि राम्रो हुन शुरु गर्यो ?
हाम्रोमा कक्षा ८/९ सम्म ९८ प्रतिशत नै सिकाइ उपलब्धि रहेको छ । एसइइमा पनि ९० प्रतिशतमाथिकै नतिजा छ । हाम्रो विद्यालयमा सिकाइ राम्रो भएकाले नै निजी विद्यालयहरुबाट समेत यहाँ आउने विद्यार्थीको चाप बढी छ । आएजतिलाई भर्ना लिन सक्नै अवस्था नै हुँदैन । भौतिक पूर्वाधारको कमीले आएकामध्ये आधालाई पनि भर्ना गर्न कठीन छ । सरकारी विद्यालय हो आएजतिलाई भर्ना लिनु पर्छ थाहा छ तर आएजतिलाई भर्ना गरेर पढाउने ठाउँ छैन । यदि नेपाल सरकारले साँच्चै भौतिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइदिने हो भने सुधार नहोउञ्जेल बिहान ९ बजेदेखि ५ सम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिदिने हो भने निजीभन्दा कैयौं गुना राम्रो विद्यालय बनाएर देखाइदिन्छौं । निजी विद्यालयलाई गाली गर्ने होइन । सामुदायिकले राम्रो नगरेकाले नै उनीहरु आएका हुन् । यदि सामुदायिक राम्रा बनाउने हो भने निजी आफंै पाखा लाग्छन् । निजीले बढी मिहिनेत गरे सामुदायिकमा कम मिहिने त भएको मात्रै हो । सरकारले पनि सरकारी तलब सुविधा खाने शिक्षक कर्मचारी र राजनीतिज्ञका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर त्यसै माथि उठ्छ ।
२०७५ जेष्ठ १८ गते ११:२८मा प्रकाशित